Sary Erotika Tamin’ny Gazety Mpanala Baraka Ahitana Vehivavy Kandidà Depiote ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2016 6:13 GMT
Nandresy ireo sakana miharihary tamin'ny fiandohan'ity volana ity i Baronova hisoratany hirotsaka hofidiana, nahangona sonia efa ho 15.000 handraisany anjara ho kandida mahaleotena amin'ny fifidianana. Iray amin'ireo kandidà 18 tohanan'ny hetsika ara-politika “Open Rosia (Rosia Misokatra),” izay naorin'ilay mpanefoefo teo aloha tamin'ny solitany, efa lasa mpanohitra ara-politika, Mikhail Khodorkovsky, izy. Mba hanangonana ny sonia ilaina amin'ny firotsahany hofidiana, nanetsika olona eo amin'ny 400 eo ho eo izy ho mpiasan'ny fanentanana. Voalaza fa nanao findramam-bola manokana mitentina 2 tapitrisa robla (mihoatra ny 31.000 dolara) ihany koa izy mba hamatsiana vola ny fampielezan-keviny.
Mirotsaka hofidiana ao amin'ny distrikam-pifidianana afovoany ao Moskoa i Baronova, ary hifanandrina amin'i Nikolai Gonchar, kandidà avy amin'ny antokon'ny fitondrana “Rosia Mitambatra”, sy Andrei Zubov, izay tohanan'ireo antoko demaokraty “Yabloko” sy “Parnas . “(Tamin'ny Martsa 2014, taorian'ny fanakambanana an'i Krimea amin'i Rosia, somary nahazo laza tao anatin'ny tsikeran'i Kremlin i Zubov tamin'ny fahaverezan'ny asany tao amin'ny Oniversite rehefa avy nanoratra lahatsoratra fanadihadiana mampitaha ny fakàna tany an-keriny ataon'i Moskoa amin'ny fakàn'ny Nazi ny Sudètes.)
Nahatonga ireo mpomba an'i Zubov sasany hiampanga an'i Baronova ho kandidà “mpandringana”, navelan'i Kremlin hifaninana hampizarazara ny vaton'ny mpanohitra, ny fisian'ireo demaokraty liberaly roa ao amin'ny fari-pifidianana iray ao Moskoa. Nilaza tao amin'ny Twitter ohatra androany ilay mpikatroka malaza miady amin'ny kolikoly, Alexey Navalny, fa ny sary tafaporitsaka misy an'i Nemirovskaya dia “mampiharihary” fa “mpandringana” nirahina mba tsy hahalany an'i Zubov ao amin'ny Duma i Baronova. (Namazivazy avy hatrany an'i Navalny tamin'ny fangatahana ny hialàn'i Baronova amin'ny fifidianana i Petr Verzilov, vadin'ilay mpitarika ny Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova.)
Toa nilaza tamin'i Nemirovskaya ny Life.ru fa ny sary miaraka amin'i Baronova dia nalaina tamin'ny iPhone 4— smartfinday nolazain’ i Nemirovskaya fa tsy nampiasainy nandritra ny efa-taona. Araka ny filazan'i Olga Borissova, namana akaiky an'i Nemirovskaya sy mpikambana hafa ao amin'ny ekipa fampielezan-kevitr'i Baronova, nalaina tamin'ny herintaona ny sary. Tsy nety nanome vaovao fanampiny i Borissova, izay mpanoratra taloha tao amin'ny RuNet Echo.
Na aiza na aiza ao amin'ny media sosialy, miha-mafàna ny vazivazy ratsy ao amin'ny aterineto. Tamin'ny fifanandrifian-javatra hafakely, nanambara ireo vehivavy roa hafa mpampisara-bazana ao amin'ny kolontsaina ara-politika ao Moskoa—Xénia Sokolova, tonian-dahatsoratra vaovao ao amin'ny Esquire rosiana, sy Lessia Ryabtseva, tale lefitra taloha tao amin'ny radio akon'i moskoa fa hiara-hiasa amin'ny fifidianana amin'ny Septambra amin'ny fanentanana ao amin'ny Duma izy ireo. Ny vaovao tampoka momba ireo vehivavy efatra ireo—izay samy mavitrika amin'ny fiainam-bahoaka sady tia mampidera lamaody sy vatana izy rehetra, dia nahatonga ireo fanehoan-kevitra mahazatra avy amin'ny lehilahy tao amin'ny aterineto Rosiana – izay nifandimby teo amin'ny fandinihana lalina momba ny vehivavy tanora manintona miara-maka sary sy amin'ny ankapobeny, sy ireo hatsikana maniratsira vehivavy momba ny vehivavy tazan'ny vahoaka ao Rosia.